Dalka Venazuela oo xasarad ay ka taagantahay - BBC News Somali
Dalka Venazuela oo xasarad ay ka taagantahay
Image caption Dibadbaxyada Venazuela
Dowlada dalka Venazuela ayaa ku dhawaaqday in ay ka baxeyso ururka ay ku midobeen dalalka Latiin America kaddib markii ay ku edeysay in ay soo farageliyeen arrimaha dalkaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Venazuela Mr Delcy Rodriguez ayaa sheegay in madaxweyne Nicolás Maduro uu ku amray in uu dalka ka difaaco faragelinta shisheeye, Waxaana arrintani uu ku dhawaaqay waxyar uun kaddib markii dalalka ka tirsan ururkaasi ay u codeyeen in ay qabtaan shir degdeg ah oo ay yeeshaan wasiirada arrimaha dibada ee dalalka Latin America oo ay uga arrinsanayaan xasaradaha dhaqaalaha ee ka taagan dalka Venazuela.
Image caption Wasiirada arrimaha dibadda ee Venazuela Delcy Rodriguez
Dibadbaxyadii u dambeeyay ee looga soo horjeedo dowlada dalkaasi oo ka dhacaya caasimada dalka Venazuela ee Caracas ayaa waxaa lagu dilay wiil da' yar oo u dhashay Venazuela kaddib markii ciidamada Booliska ay ku dhufteen sunta dadka ka ilmeysiisa.
Ku dhawaad sodon qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadani looga soo horjeedo dowlad madaxweyne Nicolás Maduro oo dalkaasi ka bilowday muddo bil ka hor, dalalka deriska la ah Venazuela waxaa ay walaac ka muujiyeen deganaansho la'aanta ka jirta dalkaasi.
Madaxweyne Maduro ayaa horay u sheegay in qorshihiisa dhaqaale ee uu suuqa uga saarayo nuqulka lacagta bolivarka dalkaasi oo gaaraysa malaayiin ay burburisay suuqa madow.
Balse arintaasi ayaa dhalisay dibadbaxyo kaddib markii shacabka dalkaasi ay waayen lacago cadaan ah oo ay cunto ku iibsadaan.